सन्तान कति समयको अन्तरालमा जन्माउने ? - Purbeli News
सन्तान कति समयको अन्तरालमा जन्माउने ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख २१, २०७७ समय: ८:०५:३५
पहिलो सन्तानको आमाबुवा बनिसकेका दम्पत्तिहरुले अर्को सन्तान कति समयको अन्तरालमा जन्माउने ? कतिपयले यसका लागी अस्पताल वा निजि चिकित्सक मार्फत जानकारी लिन्छन् भने कतिले आफै योजना बनाउँछन् । अझ कतिपय अवस्थामा त बिना योजना नै अनेच्छुक गर्भ रहदाँ अर्को सन्तान जन्मने गर्दछ । यसरी योजना बिना गर्भवती बन्न पुग्दा अधिकांश महिलामा स्वास्थ्य जोखिम उच्च हुन्छ ।
कहिलेकाहिं कम समय अन्तरमा जन्मने शिशुको स्वास्थ्यमा समेत यसले समस्या निम्त्याउँछ । त्यसैले दोस्रो पटक गर्भवती बन्दा दुई सन्तानको बीचमा कति समयको अन्तर हुनु आवश्यक छ ? र कति बर्षको अन्तर राम्रो मानिन्छ । यसबारे जान्नु आवश्यक हुन्छ ।
कुनै पनि महिलाले पहिलो बच्चाको आफ्नो निर्भरता बिना खान, बस्न वा हिडडुल गर्न सक्छ भन्ने अवस्थामा मात्र दोश्रो सन्तान जन्माउनु उचित हुन्छ । यसका लागी ३/४ बर्षको अन्तराल दोस्रो गर्भधारणका परिपक्व मानिन्छ । तर, जो महिलाहरुले ३० वर्षको उमेरमा पहिलो सन्तानलाई जन्माएकी छन्, उनका लागी दोश्रो गर्भधारण गर्ने उमेर कम हुन्छ ।
कारण, बढ्दो उमेरका कारण उनीहरुमा प्रजननसंग सम्बन्धित समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । तथापी २ बर्षभन्दा कम अन्तर हानिकारक हुन्छ । कामकाजी अवस्था वा कारणवशं जन्म दिनुपर्ने बाध्यता बाहेक दुई सन्तान बीचमा ३/४ बर्षको अन्तर राम्रो मानिन्छ । यो अन्तरमा पहिलो गर्भाधारण अथवा सुत्केरीपछि महिलाहरुको शरीरले पुनः पुरानो स्वरुप प्राप्त गर्न सक्दछ । साथै दुई सन्तानलाई पूर्ण रुपले तथा बराबर समय र ध्यान दिन पनि यो अन्तर राम्रो मानिन्छ ।
कतिपय अभिभावकले दुई सन्तानका बिचमा ५ बर्षभन्दा बढि अन्तर राख्ने गर्दछन् । तर यति धेरै अन्तरले दुबै बच्चाहरु बिच निकटतामा कमी आउने गर्दछ ।
उमेर अनुसारको स्वभाव नमिल्ने, जेठोलाई माया कम भएको महशुस हुने लगायतका कारण भोलिका दिनमा दुई सन्तानका बिचमा मनमुटाव हुने गर्दछ । त्यसैले पहिलो गर्भाधारणपछि दोस्रो सन्तानको योजना बनाउनु भन्दाअघि ३/४ बर्षको अन्तर राख्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।